Ungakugwema kanjani nokwelapha ubuhlungu beqolo | Bezzia
Ungakugwema kanjani nokwelapha ubuhlungu beqolo
USusana Garcia | | Amathiphu ezempilo, Ezempilo
El Ubuhlungu beqolo bungenye yezinkinga ezivame kakhulu labantu. Ubuhlungu beqolo buvela ngenxa yezizathu eziningi, futhi akuyona nje into egcina isikhathi, kodwa kwabanye abantu iba yisifo esingelapheki. Ukuvimbela nokwelapha ubuhlungu beqolo kubaluleke kakhulu empilweni yethu.
El ubuhlungu emuva Kuyisifo esenzeka kaningi, kepha ukuthi kuvamile akusho ukuthi kuyinto enhle noma esingakhohlwa ngayo. Izikhathi eziningi lobu buhlungu abuhambisani nemikhuba eyisisekelo yosuku, ngakho-ke kumele bulwa kusukela ekuqaleni.
1 Hlola ukuma kwakho
2 Ama-pilates ne-yoga
3 Prakthiza ukubhukuda
4 Gwema ukunyakaza okungazelelwe
5 Faka ukushisa uphumule
6 Gwema ukukhuluphala ngokweqile
Hlola ukuma kwakho
Ukuma esikuthwala usuku lonke kungaba elinye lamaphuzu abalulekile okufanele siwacabangele lapho sikhuluma ngobuhlungu beqolo. Kungakhathaliseki ukuthi umsebenzi wethu uhlala phansi noma uma kungenjalo, emuva kungahlupheka kakhulu. Ukugcina ukuma okufanayo isikhathi eside kwenza imisipha ihlupheke ngakho-ke izinhlungu nezinkontileka zifika. Kumele sihambisane nesikhathi futhi futhi sizame ukwamukela ukuma okulungile lapho sisebenza. Lokhu kumele sikwenze noma ngabe sisebenza noma sihleli ekhaya, ngoba iqolo lingahlupheka noma kunini. Noma sihamba kufanele sigcine simile, ngaphandle kwalokho sizobe sicindezela amaphuzu ngemuva angalimala.
Uma kukhona noma yisiphi isiyalo esingakusiza ugweme izinhlungu emuva futhi unciphise lezo osunazo, yiPilates neyoga. Lezi imikhakha emibili ixubana nokunwebeka nokuphumula nomsebenzi wendawo esemqoka nezicubu zomzimba wonke. Zisisiza ukuthi sazi ukuma kwethu nsuku zonke futhi sikuthuthukise ngomsebenzi wemisipha osisekelayo. Umphumela uba ukuthi siyeke ukuba nalezo zinhlungu zemisipha, sinezinkontileka ezimbalwa futhi ekugcineni sijabulela umzimba oqinile noshesha kakhudlwana.
Si Ngabe ufuna umdlalo usebenze ngokwengeziwe, ungakhetha nokubhukuda. Abantu abaningi baye bazuza kulo mdlalo lapho behlushwa yizinhlungu zasemhlane. Kunenzuzo enkulu ukuthi senza ezemidlalo emanzini, lapho kungenamthelela khona kwizibeletho, ngakho-ke akukho ukulimala. Ngaphezu kwalokho, kusisiza kakhulu ukuqinisa indawo engemuva nasesiswini.
Gwema ukunyakaza okungazelelwe
Uma kufanele ukuphakamisa izinto ezisindayo noma ukunyakaza okuthile, kuzofanele uqaphele. Akufanele zenziwe ngokungazelelwe, njengoba singalimala. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuphakamisa izinto ngobuchule obufanele, imilenze yakho ihlukane, umhlane uqonde futhi amadolo egobile, kulapho-ke lapho sizogwema ukuthwala isisindo ngemuva kuphela.
Faka ukushisa uphumule
Uma unezinhlungu zasemhlane, into edingeka kakhulu lokho iya kuchwepheshe bese ulandela imihlahlandlela yabo. Isikhathi esiningi basinikeza ama-anti-inflammatories kodwa futhi kuyadingeka kakhulu ukuphumula nokushisa indawo ukuze imisipha ikhululeke. Uma singaphumuli, kuzoba nzima ngathi ukuthi silulame ekulimaleni.
Gwema ukukhuluphala ngokweqile
Ukuhlala phansi nokukhuluphala ngokweqile kukabili izitha zomhlane wethu. Kuyiqiniso impela ukuthi uma sinesisindo esithe xaxa, iqolo liyahlupheka, ngakho-ke kuyadingeka ukugwema ukuzuza kwesisindo. Impilo enempilo ngokuvivinya umzimba njalo nokudla ngendlela efanelekile isisiza ukuthi sigweme izinkinga eziningi futhi phakathi kwazo kukhona izinhlungu zomhlane, ezivame kakhulu namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Ungakugwema kanjani nokwelapha ubuhlungu beqolo
Ukubaluleka kokuxolela kwabashadile
Umkhuba we-HIIT ekhaya: Azikho izaba!